4.12.2016 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
1. ကဖင်းဓာတ်ပါတဲ့ ဖျော်ရည်တွေ အများကြီးမသောက်ပါနဲ့
တစ်နေ့လုံး ကော်ဖီသောက်နေရင် လန်းဆန်းနေတယ်လို့ထင...
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို ရေစင်အောင် မဆေးဘဲစားရင် ဒီရောဂါတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်
1. Staphylococcus (ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ခြင်း)
2. အသည်းရောင်အသားဝါ A
3. ကပ်ပါးပိုးတစ်မျိုးကြောင့် အူရောဂါဖြစ်ခြင်း (Cyclosporiasis)
3.12.2016 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
သကြားက အဝလွန်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါတွေဖြစ်စေတဲ့အပြင် ကင်ဆာရ...
World AIDS Day 2016 နေ့အသိပညာပေးအခမ်းအနားကျင်းပ
2.12.2016 | ဂျာနယ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့် သတင်းများ
နှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလ၁ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သည့် World AIDS Dayကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကျင်းပလျက်ရှိရာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း အများပြည်သူအကြား အသိပညာမျ...